Rehefa nanaitra an'izao tontolo izao i Steve Jobs tamin'ny fampisehoana WiFi | Vaovao IPhone
Rehefa nanaitra an'izao tontolo izao i Steve Jobs tamin'ny fampisehoana WiFi
Ny teknolojia WiFi izay efa hita amin'ny singa isan'andro indrindra, na dia ao amin'ny tehina USB kely, mbola tsy nisy toa an'io. ¿Misy mahalala ve hoe iza no fitaovana ampiasain'ny mpanjifa voalohany misy WiFi? Misy mahalala ve hoe iza no mpanamboatra voalohany nitondra WiFi ho an'ny mpampiasa? Ahoana no mety ho iray hafa, io marika io dia Apple, ary ny fampisehoana an'i Steve Jobs dia, tahaky ny maro hafa, voatahiry ao anatin'ireo horonantsary tsy hay hadinoina tadidinao foana, ary mieritreritra aho fa fotoana mety hanaovana an'izany.
Tamin'ny taona 1999, tao amin'ny Macworld any New York, tamin'ny fampisehoana iBook G3, ilay solosaina finday sarobidy izay tsy maintsy niaritra nantsoina hoe zavatra tsy misy dikany toy ny "fonony rano", ary ankehitriny mihoatra ny iray no maniry hanana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ilay horonan-tsary izay anananao eo ambonin'ireto andalana ireto dia misy ny Keynote of Jobs iray manontolo, miaraka amin'i Noa Wyle, mpiaro ny "Pirates of Silicon Valley" miseho eo amin'ny sehatra Jobs. Manomboka amin'ny ora an-tsary dia manomboka ny fotoana itenenanay. Manomboka mijery Internet amin'ny iBook ny asa, saingy raha vao esoriny eo ambony latabatra ilay izy ary entiny any amin'ny toeran-kafa vao tsapan'ny vahoaka fa mifandray tsy misy tariby izy.
Tsy misy tsy fahampiana ny fotoana "showman" an'i Steve Jobs, mandalo hoop-hoop manodidina ny laptop hanehoana fa tsy nisy tariby na taiza na taiza. Nilaza izy avy eo fa amin'ny volana na taona ho avy ny tsirairay dia handray anjara amin'ity haitao vaovao ity. Raha ny marina dia marina ny azy. Enga anie isika hanana fotoana mahatalanjona toy izao tsy ho ela rehefa hanaparitaka ny saintsika amin'ireo Apple izay mankafy ny vokariny i Apple.
Fanazavana fanampiny - Sandisk dia mandefa ireo kapila USB misy WiFi
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Rehefa nanaitra an'izao tontolo izao i Steve Jobs tamin'ny fampisehoana WiFi
Flugencio dia hoy izy:
Nolazain'izy ireo tamiko fa Steve Jobs no namorona ny kodiarana, andao hojerentsika raha afaka manamarina izany ianao, azafady.
Mamaly an'i Flugencio
Tsia, tsy toy izany. Tsy namorona WiFi ihany koa izy, fa izy no voalohany nanana izay nilainy hametrahana azy amin'ny solosaina natokana ho an'ireo mpampiasa "normal", ary na tiany na tsia, izany no nanoratana ny tantara. Ny sasany tsy te hanaiky ny zava-misy na dia iharan'izany aza.
J. Ignacio Videla dia hoy izy:
Fantatrao tsara izay lazain'izy ireo:
"Tsy voalohany akory izahay fa ho tsara indrindra"
Valiny tamin'i J. Ignacio Videla
Angamba tsy noforoniny ilay izy fa hainy ny manamboatra azy ho mahasoa kokoa antsika …………… napetrany amin'ny iPods :-))))
Blutrol, ahoana ny fampiasana azy amin'ny lalao?
Football Quiz, fampiharana ho an'ireo mpankafy baolina kitra indrindra